Nnwom 106 NA-TWI - Awurade adɔe - Kamfo Awurade! Monna - Bible Gateway
Nnwom 105Nnwom 107
Nnwom 106 Nkwa Asem (NA-TWI)
106 Kamfo Awurade! Monna Awurade ase efisɛ oye; ne dɔ wɔ hɔ daa. 2 Hena na obetumi aka nneɛma akɛse a wayɛ? Hena na obetumi akamfo no?